Dowlada Puntland oo ka hadashay Calanka Cusub iyo Astaanta. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Dowlada Puntland oo ka hadashay Calanka Cusub iyo Astaanta.
Wasiirka Dastuurka iyo Dimuuqraadiyada Dowlada Puntland Cabdi Xassan Jimcaale oo la hadlaayay Horseed Media ayaa faahfaahin ka bixiyey Calanka iyo Astaanta cusub ee Dowlada Puntland ay maalinti shalay Barlamaanka Puntland ku ansixiyeen fadhi ay ku yeesheen magaalada Garoowe.
Wasiirka ayaa sheegay in 770-hindiso oo Calan iyo Astaan ah loo soo gudbiyey gudiga soo xulista Calanka iyo Astaanta u Gudoomiyaha ka yahay,iyadoona 620-Hindise oo ka mid ahaa calanka iyo Astaamaha ay u soo gudbiyeen qurba joogta Puntland ee ku dhaqan dunida dhaafaheeda halka 150-kalena ay usoo gudbiyeen dadweynaha Reer Puntland ee ku dhaqan dalka gudihiisa.
Mr.Jimcaale ayaa intaasi ku daray ka dib marki gudiga ay si weyn uga fikireen Calamada faraha badan iyo Astaamaha la go’aansaday in Barlamaanka Puntland la horgeeyo 8-Calan iyo Saddex Astaan.
Waxaana u ugu dambeynti taas keentay in Barlamaanka ay ku meel mariyaan calanka ka kooban Saddexda midab ee kala ah;Cadaanka,Cagaarka iyo Buluuga oo dhexda kaga taalo xidigta.
Heesta Cusub ee Puntland oo ay Maalintii Shalay ay Baarlamanka diideen
Mar u Wasiirka u ka hadlaayay Heesta Cusub ee Puntland oo maalinti shalay la horgeeyey Barlamaanka Puntland isla markaana ay dib u celiyeen oo ay diideen in ay ansixiyaan ayuu sheegay in heesta la rajaynaayo in maalmaha soo socda ay horgeeyaan Barlamaanka ayna tahay raadinteeda mid iska fudud balse ay ka soo talaabeen howlaha ugu dhibka badnaa oo ay ka mid ahayd Calanka iyo Astaanta.